West Ham oo ka dhiganeysa saxiixeeda sedexaad ee xagaagan ciyaaryahan u ciyaara kooxda Arseanl, Hadaba waa Kuma? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » West Ham oo ka dhiganeysa saxiixeeda sedexaad ee xagaagan ciyaaryahan u ciyaara kooxda Arseanl, Hadaba waa Kuma?
West Ham oo ka dhiganeysa saxiixeeda sedexaad ee xagaagan ciyaaryahan u ciyaara kooxda Arseanl, Hadaba waa Kuma?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 29-06-16 11:25 AM Kooxda West Ham United ayaa ku dhaw iney sameeyaan saxiixoodii sedexaad xagaagan xilli ay lasoo wareegayaan da’yar ka tirsan kooxda ka dhisan caasimada dalka Ingiriiska ee Arsenal.
Robinson ayaa lasoo tabinayaa inuu ka maqnaa tababarkii ay shalay sameynayeen ciyaaryahanada kale ee kooxda Gunners ka waxa uuna dhameystirayey heshiis labo sano ah oo ugu wareegayo kooxda wacdarada ka dhigtay xilli ciyaareedkii soo idlaaday horyaalka Ingiriiska ee West Ham sida lagu xusay wargeyska ugu carabka dheer dalka Ingiriiska Daily Mail.
18 sano jirkan ayaa awooda inuu ka ciyaaro daafaca bidix, balse waxa uu jecel yahay inuu ka ciyaaro garabka bidix ee weerarka, waana sababta ugu weyn ee ka dambeysay inuu ciyaaryahankan isaga huleelo kooxda uu hogaamiyo Arsene Wenger, isaga oo ka baqay inuu boos joogta ah ka waayo shaxda kooxda ka dhisan gegida Emirates.
Tyrell ayaa hormar weyn ka sameeyey tan iyo markii ugu horeysay ee uu heshiis caalami ah u saxiixay kooxdaRobinson will follow Sofiane Feghouli and Havard Arsneal horaantii sanadkii aynu kNordveit through the door to become West Ham’s third asoo gudubnsay ee 2015 ka, waxa uuna 13 jeer kasoo muuqday kooxda da’dooda ka hooseysa 21 jirada.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan inaan si rasmi ah loo shaacin qiimaha uu xidigan ugu wareegayo kooxda uu hogaamiyo Macalin Blic, balse waxaa la ogsoon yahay inuu qalinka ugu duugi doono qandaraas labo sano ah marka uu ka gudbo tijaabada caafimaadka.